अखण्ड काव्यपाठ कार्यक्रमको रिपोर्टिङ | होम सुवेदी
हास्यव्यङ्ग्य होम सुवेदी March 13, 2017, 12:40 am
एउटा आयोजकले विशेष रुपमा अखण्ड काव्यपाठका लागि विशेष प्रबन्ध गरेको थियो । गीत गाउँनेहरुलाई आफ्नै शैलीबाट बाजा बजाइदिने र काव्यपाठमा नृत्यको आवश्यकता परिगयो भने नृत्यमा सामेल हुने गरी केही रेडिमेड नर्तक नर्तकीहरु पनि आयोजकले तयारी अवस्थामा तैनाथ पारेको थियो टी ट्वेन्टीमा छक्का हान्दा नाच्न चयार पारेको नर्तकी जस्तै । यस कार्यक्रमको मूल स्वरुप काव्यपाठ भए पनि बिचमा गजलगिजोल र गीत आदिको पाठ गरेर, हास परिहास, टुक्कावाचन लगायतबाट भए पनि यसको निरन्तरतालाई खण्डित हुन दिनुुहुन्न भन्ने आयोजकको आग्रह थियो । बार बजेदेखि पाँचबजेसम्मलाई समय निर्धारण गरिएको थियो । यस अखण्डतालाई खण्डित हुनबाट जोगाइराख्न नाना थरिका कविहरु आए । पुत्ले पांग्रे गजलकारहरु अनि झिल्के गीतकारहरु पनि आए । केही तुकबन्दी लगाउने कथ्थकेहरुको पनि आगमन भयो । तयारी अवस्थामा राखिएका बाहेक दर्शक स्रोताहरुमध्येबाट पनि कोही काव्यपाठको माझमै झुम्न थाले भने कोही गीतको माझमा नाच्न पनि थाले । यो देखेर दर्शकलाई अस्ति माथिल्लो घरे मुखियाकोमा लागेको पुरानमा महिलाहरु नाचेको झल्को पनि आइरहेको थियो । तेही ठानेर पल्लो टारकी आमै झिल्के कान्छोको गजलमा नाचिन् । साँचो कुरा थाहा नपाउनेहरुका लागि यहाँ कुनै अर्कै पुरान लागेको हो कि भन्ने भान पनि भइरहेको थियो । पुरान भनेपछि नाच्नै पर्ने मान्यता बोक्नु हुने केही महिलाहरु यहाँ पनि नाच्ने अवसरको खोजीमा हुनुहुन्थ्यो र मौका पर्ना साथ जुरुक्क उठेर दाउमा दाउ मारिहाल्नुहुन्थ्यो । छमछम गरेर । ताली पनि पररररर बजिहाल्थे ।
यसै बिचमा केही महिलाहरु सभामा आएर जुता फुकाल्दै भित्र पस्नुभो ।
“खै गँहुत कता छ ? अनि जुुता राख्ने ठाउँ कता छ ?” सोध्न थाल्नुभोे ।
यसबाट त्यहाँको अखण्ड काव्यपाठ भनेको कुनै पुरानै हो भन्ने भान केही सर्वसाधारणमा परिरहेको थियो भन्ने कुरा पनि स्पष्ट हँुदै थियो । काव्यवाचनशालाबाहिर ठुलो अक्षरमा ‘पाँच घन्टे अखण्ड काव्यपाठ’ लेखिएको तुल टाँसिएकोले पनि यो भ्रम परेको हुन सक्थ्यो । अस्ति यता केराबारी महाजनको घरमा लगाएको २४ घन्टे अखण्ड भजन लगाएजस्तै कुनै अखण्ड भजन कीर्तन हुनु पर्ने कुरा सर्वसाधारणले बुझेजस्तो देखिन्थ्यो । अनि गहुँतको चाहना भएको बुझिन्थ्यो । केही केटाकेटीहरु पर्सादी पाइएला भनेर कुरेर बसेका थिए । आमाहरु गँहुतको आशमा ।
यसरी सभाको बाहिरतिर ‘पाँच घन्टे अखण्ड काव्यपाठ’ लेखेर बोर्ड राखिएको हुँदा केही सर्वसाधारण झुक्किएका थिए । अस्ति भर्खर राजभण्डारीको घरमा लगाएको पुरानमा गरिएको अखण्ड कीर्तन जस्तै यो पनि कुनै नौलो किसिमको कीर्तन होला भन्ने भान अन्य कतिपय साधारणहरुमा परिरहेको थियो । तर यो काव्यवाचन गजलगान, गीत संगीतले युक्त काव्यपाठ नै थियो । यहाँ गहुँत थिएन । यहाँ जुता फुकालेर भित्र पस्नै पर्र्र्र्दैनथ्यो । त्यसैले बाहिरै जुता फुकाल्ने र राख्ने बन्दोबस्त थिएन । यो नदेखेर माइली पुरेत्नीले ता माझै मुखबाट भनिन् कस्तो हो जुतैसँग भत्रि जान पाइने पुरान पनि ! यहाँ पर्सादको व्यवस्था थिएन । पाती चढाइरहनु परेको थिएन । तैपनि केही भक्त महिलाहरु सानो पोलिथिनमा केही फूलपाती, पर्साद र माला समेत लिएर मञ्चमा पुगी काव्यपाठ गरिरहेका कविलाई तिनै कवि मूल पण्डित होलान् भन्ने ठानेर माला लगाइदिए । केही भेटी पनि चढाइदिएको देखियो । केरा स्याउ र अरु केही फलफूल पर्सादको रुपमा चढाइदिएको दृश्य पनि देखियो । यो सबै देखेर कोही कोही स्रोता हाँसो थाम्न नसकेर बाहिर निस्केको पनि देखियो । यो कविता पाठ गर्ने पण्डित कविले अन्तमा काव्यपाठ सक्ने बेलामा आयोजकलाई सविनय सोध्नुभो
“यो दक्षिण कसले लिने ?”
अब पालो थियो कवि धर्मनाथ धर्मप्राणनाथ भार्गवको । उहाँको धार्मिक कविताले ता अखण्डकाव्यपाठलाई पूरापूरी पुराणकै रुप दियो । उहाँको वाचन लय र कविता पढ्नु पूर्व बाँधिएको भूमिकाको प्रवचनले सभालाई तीर्थालुहरुको जमघट जस्तै पारेको देखियो ।
केही महिलाहरुले आयोजकलाई तल स्रोता बस्ने स्थानबाटै सोध्नुभयो “माखनचोर कृष्णजन्मोत्सव, नन्दउत्सव र कृष्णलीला कहिले हुने हो ?”
यहाँ म ता अखण्ड काव्यपाठको दृश्यको वर्णन मात्रै गरिरहेको छुु । आयोजकले ती भक्त महिलाहरुलाई के भनेर बुझाए त्यो चैं नभनौं क्यारे ।
“हे...हे...हे यसो थियो कि..... ?” भनेर हातले खैनी माड्दै गरेको मुद्रा बनाएर उहाँ जोसुकैसँग खैनी माग्ने गर्नुहुन्छ । कुनै दाताले ता खैनीको साटो गुट्खा नै टक्र्याएको पनि देखिन्छ । ‘धन्यवाद, धन्यवाद । ढुंगा खोज्दा देउता मिल्यो भनेको यही हो’ उहाँ त्यो अवस्थामा यसै भन्नुहुन्छ ।
‘मरोस् मोरो मगन्ते !’ भनेर धेरैजसोले उहाँलाई खैनी चढाउँछन् । उहाँ दाँतको माथितिर ओठ उधिनेर खैनी च्याप्नुहुन्छ र ‘क्या स्वादिलो रहेछ !’ भनेर तारिफ गरिदिनुहुन्छ । अहिले ता उहाँको ध्यान खैनीका साथै गुट्खातिर पनि जान थालेको छ । ‘परजीवी हँु जे पाउँछु त्यो खान्छु हे...हे.. !’ भन्नुहुन्छ । केही स्थानमा उहाँलाई खरो पानी सेवन गर्ने अवसर पनि नपरेको होइन । यस वस्तुको मूल्य केही बढी नै हुने हुँदा परजीवीलाई यसको अवसर उति परिरहन्न । खैनी जतिको लत पनि यस तत्वमा उ्हाँको बसिसकेको छैन, अनि जति सहज रुपमा खैनी उपलब्ध हुन्छ यसको उपलब्धता सहज पनि छैन । उहाँलाई यो तत्व सेवन गर्ने सुविधा उति परिरहन्न । अलिक मुगो परेर होला । खैनी भएपछि उहाँको काव्यको छाँगो दिमागबाट पहाडको झर्ना झरेझैं झरिरहन्छ । अनि किन चाहियो र खरो पानी । सम्भवतः परजीवीले यो खरो पानी सेवन गरेको उति देख्न नपाइनुको कारण यही हो ।
पानभोगी महानुुभावहरुले पान खाएर उँभो मुख फर्काएर मुख भरी पानको थुक बोकेर नथुकी बोलेजसरी उहाँ पनि मुखको खैनीबाट आएको थुक एकछिन मुखै भरि पारेर केही बोल्नुपर्दा बोल्ने गर्नुहुन्छ । कहिलेकाहीं कविता पनि यसै विधिबाट गाउनुहुन्छ । उहाँ बडो शिष्ट र भलादमी पनि हुनुहुन्छ किनभने पान खानेले थुकेझैं उहाँ जहाँसुकै र जतासुकै थुक्नुहुन्न । घुटुक्क निल्नुहुन्छ । जहिले पनि मुखमा राखिएकोे खैनी गुट्खाको खार र राखले भरिएको हँड्याइँदो थुक घुटुक्क निल्दै बाँकी कामतिर लाग्नुहुन्छ । परजीवीजी यस्तो हुनुहुन्छ, उहाँको जीवनचक्र यस्तो छ । उहाँको मूल पेसा कविता कर्म हो तापनि अहिले ‘देश गुनको भेस’ भनेझैं उप पेसा गजलकारितातिर पनि सरेको छ । ‘अब देशमा जे चलन आउँछ, त्यसमा ता लाग्नै परेको छ हे... हे... !’ भन्नुहुन्छ ।
गजलवाचन वा काव्यवाचनमा परजीवीजीको जीवचक्र पनि अरुकै स्थानमा चल्दछ । उद्घोषकलाई यसो कानमा तेल मालिस गरेर काव्य वा गजलवाचनको मध्य समयमै उहाँ आफूलाई समाविष्ट गराउन रुचाउनुहुन्छ । यसै कारण बडो बाठो हुनुहुन्छ उहाँ । सुरुमा पनि स्रोता सबै आएका हुन्नन् । अन्तमा ता सभापति र प्रमुख अतिथी मात्र हुन्छन्, त्यो पनि कुनै सभामा ता प्रमुख अतिथी पनि राखिन्न, अन्तमा ता एक्लो सभापति मात्र रहन्छ । उद्घोषक पनि विदा लिइसक्छन् र बांगो ढाड लगाएर शौचालय जाने बहानामा हलबाहिर निस्कन्छन् । सभापतिलाई ता जहाँ सुनाए पनि ता भयो नि । उहाँलाई ता बाटोमै सुनाए पनि भयो वा घरमा गएर सुनाइदिए पनि भयो । अरु नभएपछि आखिरमा सभापतिलाई मात्र सुनाउनु न हो । उहाँको सिद्धान्त वा तर्क यही हुने गर्छ । साँचोमा स्रोता रहने भनेको कुनै पनि कार्यक्रमको मध्यसमय हो । यसैले मध्यसमयमा सुनाउनुमा नै केही लाभ हुन्छ । उहाँको यो तर्क बडो व्यावहारिक छ । अहिलेको उहाँको यो पालो पनि अर्का कविको अनुपस्थितिले गर्दा आएको थियो । धन्न लाइनको कविलाई यसै बेला शौचालय जानु परेकोले उहाँले पालो पाउनुभो । उहाँ यस्तै पालोका पर्खाइमा हुनुहुन्छ । अहिले पनि यस्तै प¥यो नत्र फेरि पछि पर्नुहुने थियो । परजीवीजीले काव्यपाठको क्रममा मञ्चमा गएर पहिले गलो सफा गर्नुभो । त्यो बेलासम्म मञ्चमा मान्छेहरु निकै थिए । खैनी ता आखिर परजीवीलाई जसले पनि दिन्छ । त्यसैले खैनी केही अधिक खाने बानी परेको हुँदा गलोमा खकार जमेर खोक्ता खेरि खकारका फाल्सा फाल्सा आउने गर्छन् र अझ कडा खोक्नु पर्दा उहाँको गलाबाट सानातिर खकारपिण्डहरु हावामा उछिट्टिने गर्छन् । अहिले पनि यस्तै भयो । केही खकार पिण्डहरु पोडियममा छरिए । केही वरपरि पुगे । मुखैमा रहेका खकारका लाप्साहरु खुप्लुक्क निलेर कविले गजल निकाले खल्तीबाट । अझै पनि केही खाकखाक खुकखुक गरेपछि उनको गजलवाचन सुरु भयो । उनको गजलको शीर्षक थियो निद्रा ।
स्रोताहरु निद्राले अघिदेखि नै सताइएका भए पनि परजीवीको गजलवाचनमा सारै मुस्किल पर्न थाल्यो । तिनीहरुलाई बिउँझै रहने स्थिति हुन छाड्यो । एकातिर शीर्षक नै निद्रा हुनु र अर्कातिर स्रोतामा पनि निद्राको प्रभाव सारै आएकोमा कविलाई आफ्नो गजलको प्रभाव आफू मञ्चमा आउनासाथ परेको आभास भइरहेको थियो । कोही स्रोताहरु आफ्नो टोपी झिकेर मुख छोपी निदाउन थाले भने कोही पल्लो कुर्सीमाथि खुट्टा राखेर जिउलाई तेर्साे पार्न थाले । कोही ता एकै छिनमा घुर्न पनि थाले सम्विधान सभाका सांसदहरु सभाचलिरहेको बेला घुरेझैं । तर कविजीको कविताले उनीहरुलाई सारै राम्रो निद्रा परेको अनुभूति भएभैंmं भान भइरहेको थियो । गजलकै शीर्षक ‘निद्रा’ भएपछिलाई स्रोताहरुले सुुतेको भान कतैबाट पनि परिरहेको थिएन ।
यता हेर्यो यतै उँघ्ने सबैलाई बनाएछ ।
उहाँको गजलको यस पहिलो श्लोकलाई उहाँले दस पटक दोहो¥याउनुभो । उहाँको गजलमा बाजा बजाउनेहरुले केही तालबेतालका बाजा पनि ठोके । केही बिउँझेका भक्तहरुले उहाँलाई पनि फूल माला र अबिर लगाइदिए ।
एक जना महिला भक्तले यसै बेला गुनासो गर्नुभो—“लौ धुप पनि बाल्नु पर्ने ? कता बालूँ ? केही व्यवस्था गरेको छैन ?”
अर्काे एक जना भक्त हातमा सयको नोट निकाल्दै अघि सर्नुभो र भन्नुभो—“खै कता छ दानदातव्यका लागि तयार पारिएको दानपेटिकाको बाकस ?”
यसपछि भएभरका कविहरुको, गजलकारहरुको, टुक्काबाजहरुको अनि गिदाङ्गेहरुको पालो पुग्दै गयो । सभास्थल पनि रित्तो हुँदै गयो । स्रोताले पानी खाएको प्लास्टिकका बोतल र सभामा उपस्थित भएकाहरुले सभामा पारेको फोहोर सफा गर्ने एक सानो नानीलाई हेरेर उद्घोषकले भने—“नानीका पनि केही कविताहरु छन् कि सुनाउन सक्छौ भने आऊ सुनाऊ ।” उद्घोषकको आग्रहमा ऊ वाल्ल मात्र परेर हेरिरह्यो ।
“अब कोही बाँकी हुनुहुन्छ कि ?” अखण्ड काव्यकाठको कार्यक्रम सकिन सकिन लागेको बेलामा सञ्चालकले माइकबाट पुुनः आग्रह गरे । भोजभतेरमा कोही भतेर खान छुट्यो कि भनेर सोधिएझैं गरी सबैलाई एक एक गरेर सोधियो । लभगभ सबैको सकिएको बुझियो ।
“लौ उहाँको ता छुट्यो नि !” मञ्चमा रहेका सभापतिले मतिर देखाउँदै मेरो पालो नआएको सूचना गर्नुभो र उद्घोषकले मलाई मेरो रचना पनि सुनाउन आग्रह गर्दै मेरो काव्यपाठ पछि सभापतिको मन्तव्य हुने र आपूm पनि जानी नजानी कार्यक्रम सञ्चालन गरेकोमा क्षमा माग्दै बिदा भएको कुरा सुनाएर बिदा हुनुभयो ।
पत्रिकालाई रिपोर्टिङको यो सामग्री अलिक चाँडो पुगाउनु पर्ने हुनाले तिनलाई के भन्नु के भन्नु हुँदाहुँदै लागें आप्mनो बाटो ।
भद्रपुर—१०, झापा ।